HomeMaqaaloKenya: Guurkii Rooxaanta, dumar guursada rag dhintay
April 20, 2018 (Hornnews24.com) – Dadka Beesha reer Kamba (amaba Akamba) ee Bariga Kenya, ayaa waxaa ka jira dumar aan noloshooda arag ragga qaba sababtoo ah waxaa guursaday rooxaan, rag dhintay gabdhahaan oo aan dhalan.
Waxaa ka jira halkaasi dhaqan gabadha loo guuriyo nin dhintay waqti hore waana dhaqan soo jireen ah oo ay leeyihiin qabiilka Bantuuga ee Kamba. “Haddii uu dhinto wiil aan guursan, waalidkiisa ayaa isagoo mootan u guuriya gabar ay u soo xulaan; sidaas darteed ayuu wiilkii dhintay faraciisu u sii jiri doonaa.
Dhaqankaan ayaa waxaa dalka Kenya looga yaqaan Kuungamia Isyitwa (oo macnihiisu yahay, ilaali jiritaanka magaca ninka dhintay). Gabadha loo guuriyey ninka dhintay ayaa waxaa la seexan kara rag loogu talo galay in ay uur u yeelaan ilmihii ay qaado ayaa waxaa la siinayaa ninkii dhintay ee loo guuriyey.
Waxaa macquul ah in ay gabadhaasi haysato 6 ciyaal oo ay dhaleen rag kala duwan balse ku abtirsada ninkii dhintay ee loo guuriyey oo la doonayo inuu faraciisu aduunka baaqi ku ahaado. Ninka dhintay waa ruuxaanta gabadhaan qabta oo leh caruurtaas.
Waalidka ninka dhintay ayaa baadi gooba gabar qurxan oo doonaysa in ay guursato nin dhintay markii la helo gabadhaas ayaa waxaa la dhiibaa xoolo yarad ah iyo hadiyado la siiyo reerka ay ka dhalatay gabadhaasi waxaana loo dhigaa aroos in kastoo ninka la seexanayaa aanu ahayn ninkii dhintay balse uu yahay nin la mid ah orgi ari loo daayey.
Dhaqankaan ayaa u dhow dhaqan ka jira dalka Uganda oo ah in eedadu la seexato gabadha ay eedada u tahay ninka soo guursada.
Ugaandha dhaqan ka jira ayaa wuxuu qabaa in ay eedadu gabadha ay eedada u tahay ee aan guursan ayadu tababarto oo ninka guursanaya gabadhaas ay eedadu la seexato oo ay hubiso inuu yahay nin awood leh. Waa dhaqan aan wax badan doorin kann kor ku xusan.
Halkaan Hoose ka aqriso warkaas oo faahfaahsan:
Ra’isal wasaarihii Australia Turnbull oo la casilay iyo Scott Morrison oo lagu bedelay